कोरियन नागरिकको नेपालमा भव्य बंगुर फार्म, यति छ लगानी (भिडियो सहित)
August 18, 2020 2352
बंगुर फार्म मा काम गर्दै
शहरी बाताबरण भन्दा धेरै टाढा गाउँमा बंगुर फार्म गरिरहेका कोरियन नागरिक आफूलाई नेपालमा बस्न र काम गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको सुनाउँछन् । लाखौंको लगानी बाट अत्याधु`निक बंगुर फार्म खोलेर विक्त गाउँमा उद्यम गरिरहेका छन् ।
बंगुर पालनबाट भएको आम्दानी नेपालमा नै खर्च गर्ने उनी बताउँछन् । मलाई पैसाको काम छैन यो पैदा नेपालकै हो उनी भन्छन् । उनी आफ्नो बंगुर फार्म लाई भौतिक पूर्वाधार सम्मपन्न गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।
नेपाली हरु लर्को लागेर वैदेशिक रोजगारी तर्फ गइरहेको अवस्थामा नेपालमा नै धेरै सम्भावना छन् भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हो कोरियाको बंगुर फार्म । हामी नेपाली युबहरुले पनि उनको काम बाट केहि सिक्नु जरुरी छ ।
पी एन पि मिडियाले तयार गरेको यो भिडियो हेर्नुहोस् ।
Prevडलर सहित अन्य मुद्राको आजको भाउ हेर्नुहोस्
Nextसुशान्तसिंह राजपुत र उनकी पूर्व म्या’नेजर दिशाको मृ’त्युमा भेटियो यस्तो कनेक्सन !
विदेशबाट श्रीमान आउना`साथ हराएकी सीता ८ दिनपछि यस्तो अवस्थामा फेला परिन् (भिडियो सहित)
जब सुशान्त’को कुकुर उनको फोटो हेरेर धरधरी रोयो….
पशुपति शर्माको कोरोना भाइरस विरुद्ध’को यो गीत (भिडियो सहित)